Tsy handrehitra ny lasa ny Apple Logo ny iPhone-ko! Ity ny The Fix. - Iphone
Ipad dia mampiseho sary famantarana paoma fotsiny
ahoana no hamafana sary amin'ny iphone
efijery mena amin'ny iphone 5
ahoana no ahafahako manala sary amin'ny iphone-ko
mijanona tsy mamaly ny efijery iphone 6
Tsy handrehitra ny lasa ny Apple Logo ny iPhone-ko! Ity ny The Fix.
Mandritra ny famoahana ny iPhone dia tsapanao fa mandany fotoana maharitra tsy mahazatra io. Ny efijery iPhone-nao dia tsy mampiseho afa-tsy ny sary famantarana Apple ary tsy misy zavatra hafa ary tsy fantatrao izay hatao. Ao amin'ity lahatsoratra ity, aho hazavao izay tokony hatao rehefa tsy hody tsy handalo ny sary famantarana Apple ny iPhone-nao .
Maninona ny iPhone no tsy hivadika ny Apple Logo?
Rehefa mamelona ny iPhone-nao ianao dia manomboka ny lozisialy ary manamarina ny fitaovana rehetra hahalasa fa mandeha tsara. Ny Apple logo dia aseho amin'ny iPhone anao raha mitranga izany rehetra izany. Raha misy tsy mandeha eo an-dàlana dia tsy hiodina amin'ny alàlan'ny sary famantarana Apple ny iPhone-nao.
Mampalahelo fa mazàna io dia famantarana ny olana goavana. Na izany aza, mbola misy ny vintana azo amboarina.
Raha vao nosoloinao ny ampahany tamin'ny iPhone-nao ary manana an'ity olana ity ianao dia mety tsara raha manandrana mamerina an'io ampahany io. Raha tsy nosoloinao fotsiny ny ampahany amin'ny iPhone dia araho ny dingana etsy ambany!
Indraindray ny fanerena ny iPhone hamerina indray dia ny tokony hataonao mba hamahana ny olana. Koa satria tsy handrehitra ny sary famantarana Apple ny iPhone dia tsy maintsy hamerina mafy ianao. Ny fomba famerenana mafy iPhone dia miankina amin'ny maodely anananao, noho izany dia nopotehinay ny fizotran'ny fitaovana tsirairay.
iPhone 6s, iPhone SE, & Talohan'izay
Tsindrio miaraka ary tazomy ny Bokotra an-trano ary ny bokotra herinaratra (Bokotra fatoriana / mifoha) mandra-pahatonga mainty ny efijery ary hiseho indray ny sary famantarana Apple.
Tsindrio ary tazomy ilay bokotra midina ary ny bokotra herinaratra mandritra izany fotoana izany. Tazomy hatrany ny bokotra roa mandra-pisehoan'ny sary famantarana Apple eo amin'ny fampisehoana.
Atombohy amin'ny fanindriana sy famotsorana ny Bokotra Volume Up . Avy eo, tsindrio ary alefa ny Bokotra Volume Down . Farany, tazomy ny bokotra ankilany . Tazomy hatrany ny bokotra sisiny mandra-pisehoan'ny Apple logo. Aza adino ny manindry ny bokotra volume eo am-piandohana, raha tsy izany dia mety handefa hafatra amin'ny sendra anao SOS ianao!
ny Device Firmware Update (DFU) avereno voafafa ary avereno avereno ny rindrambaiko sy ny firmware an'ny iPhone. Ity karazana famerenana amin'ny laoniny ity ihany koa no dingana farany azonao raisina mba hialana tanteraka amin'ny karazana olana rindrambaiko iPhone.
Etsy ambany, notapahinay ny dingan'ny famerenana amin'ny laoniny DFU ho an'ny maodely samihafa amin'ny iPhone.
Avereno DFU iPhones taloha
Ampifandraiso aloha ny iPhone amin'ny solo-sainao amin'ny alàlan'ny iTunes amin'ny alàlan'ny tariby famenoanao. Avy eo, tsindrio ary tazomy miaraka amin'ny bokotra herinaratra sy ny bokotra Home. Rehefa afaka valo segondra teo dia alao ny bokotra herinaratra raha manohy manindry ny bokotra Home. Afaho ny bokotra Home rehefa miseho amin'ny iTunes ny iPhone-nao.
Atombohy hatramin'ny voalohany ny fizotrany raha tsy niseho tao amin'ny iTunes ny iPhone.
Raha tsy nipoitra tao amin'ny iTunes ny iPhone dia manomboha hatrany am-piandohana.
DFU hamerina iPhone 8, iPhone X, iPhone XS, ary iPhone XR
Mampiasà tariby taratra mba hampifandray ny iPhone amin'ny solosainao amin'ny iTunes. Manaraka, tsindrio ary avelao ny bokotra Volume Up, avy eo tsindrio ary alao ny bokotra volume down, avy eo tsindrio ary tazomy ny bokotra sisiny.
inona no dikan'ny alligators amin'ny nofy
Rehefa lasa mainty ny écran dia tsindrio ary tazomy ny bokotra midina rehefa manohy mitazona ny bokotra eo anilany. Andraso tokony ho dimy segondra, avy eo alefa ny bokotra ankilany raha mbola mitazona ny bokotra midina ianao. Tazomy hatrany mandra-pisehoan'ny iPhone ao amin'ny iTunes.
Fantatray fa be dia be izany, koa zahao ny horonantsary misy anay raha tianao ny hitetezanay ny fizotrany!
Fiatrehana olana mety hitrandrahana
Raha mbola tsy hivadika ny sary famantarana Apple ny iPhone-nao dia olana olana iray no miteraka olana. Ity olana manokana ity dia matetika mitranga aorian'ny asa fanamboarana botched.
Raha nankany amin'ny fivarotana fanamboarana antoko fahatelo ianao, dia mamporisika anao hiverina any raha hijery raha hamaha ny olana izy ireo. Satria izy ireo angamba no nahatonga izany dia misy ny vintana hanamboarany ny iPhone-nao maimaim-poana.
Raha nanandrana nanolo na inona na inona samirery ianao dia te hamerina ilay iPhone ho amin'ny toetrany taloha indray mitondra azy any amin'ny Apple Store . Tsy hikasika ny iPhone ny Apple na hanome anao vidiny fanoloana tsy misy fiantohana raha mahatsikaritra izy ireo fa nanolo ireo singa ao amin'ny iPhone misy faritra tsy Apple ianao.
hanin-kotrana safidy fanamboarana lehibe hafa azonao atrehana. Puls dia orinasa mpanamboatra be fangatahana izay mandefa teknisianina manam-pahaizana mahitsy eo am-baravaranao. Manamboatra iPhones eny an-toerana izy ireo ary manolotra fiantohana mandritra ny androm-piainany amin'ny fanamboarana.
Miantsena telefaona vaovao
Raha tokony handoa vola amin'ny fanamboarana lafo ianao dia mety te hieritreritra hampiasa an'io vola io hividianana telefaona vaovao. Zahao ny fitaovana fampitahana an-tariby amin'ny UpPhone.com mampitaha ny telefaona rehetra isaky ny mpitatitra tsy misy tariby! Matetika, mpitatitra dia hanolotra fifanarahana tsara amin'ny telefaona vaovao raha manapa-kevitra ny hifindra ianao.
Paoma iray andro
Fantatray fa mampiady saina izany rehefa tsy hody tsy handalo ny sary famantarana Apple ny iPhone-nao. Fantatrao izao ny fomba fanamboarana an'io olana io raha toa ka miverina indray izany. Misaotra anao namaky. ary ampahafantaro anay ny nanamboaranao ny iPhoneo amin'ny fanehoan-kevitra etsy ambany!